Mvura Magetsi Valves Fekitori, Vatengesi - China Mvura System Mavharuvhu Vagadziri
1318 Pressure Kuderedza Valve
Magadzirirwo Kuderedza vharuvhu: inoderedza yakakwira inlet kumanikidza kune yakaderera nzira yekubuda. Kakawanda kuburitswa kwekumanikidza pamusoro pehupamhi kuyerera kwakawanda. Pilot-inoshandiswa main vharafu isiri pasi pekumanikidza kudonha. Kuburitsa kwekumanikidza kunochinjika ne singe screw. Inogona kuchengetedzwa pasina kubviswa kubva paipi pombi. Adjustable kuvhura / mhinduro kumhanya. Yakagadzika mirau padyo-zero kuyerera. Flanged uye kuchera zvinoenderana EN1092-2 PN10 / 16; ANSIB16.1 Kirasi125. Grooved magumo inoenderana neAWWA ...
2108 AWWA C504 C516 Kaviri Eccentric Butterfly Valve
Zvivakwa zvedu zvakashongedzwa zvakanaka uye zvakasarudzika zvemhando yepamusoro manejimendi mumatanho ese echizvarwa anotigonesa kuvimbisa kuzere kwevatengi kugutsikana kwe 2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Butterfly Valve, Zvese zvigadzirwa zvinouya nehunhu hwakanaka uye hwakakwana mushure-kutengesa masevhisi. Yakanangana nemusika uye yakanangana nevatengi ndizvo zvatave tichitevera. Nomwoyo wose tarisira Win-Win mushandirapamwe! Zvivakwa zvedu zvakashongedzwa zvakanaka uye zvakasarudzika yepamusoro mhando manejimendi mune ese matanho eiyo g ...
GD1 GD2 BS5163 AWWA C515 NRS Yakashinga Yakagara Gedhi Valve ine Extension chokurukisa
Tsanangudzo GD1: 150 :H1≤1000, GD2: H1 H1000. Iyo nhambwe kubva pakati wepakati mutsara wevhavha kusvika pasi ichapihwa nemutengi. Paunenge uchipa iyo data, ndapota ita shuwa kuti iko kukanganisa hakufanirwe kudarika ± 20mm. Yakashongedzerwa neT-wrench: gumi seti eakaenzana saizi mavhavha akagadzirwa neT-wrench imwe. Vatengi vanofanirwa kutenga ichi wrench kana vachida zvimwe. Iyi yakananga yakavigwa vharuvhu yetigedhi yakagadzirirwa BS.
9709 Kaviri Orifice Mhepo Relief Valve
Rondedzero Inopa mashandiro eese ari maviri Mhepo Kusunungura uye Mhepo / Vhuvhu maVheji. Kunonatsa huwandu hwakawanda hwemhepo pane system kutanga-up. Inopa dziviriro kubva pombi yekudonha nekuda kwevhavha. Vent iyo yakaunganidzwa madiki mavhoriyamu emhepo panguva yakajairwa mashandiro ehurongwa. NPT kana Metric tambo yeinopinda. Kushanda Kushanda uye Kupisa 16bar yakarongwa pa -10 ° C kusvika 120 ° C. Ngura Kudzivirirwa Fusion yakasunganidzwa kupfeka kana mvura epoxy yakapendwa mukati nekunze. Chinyorwa Magadzirirwo Bo ...
9708 Yega Orifice Mhepo Relief Valve
Rondedzero Inopa mashandiro eese ari maviri Mhepo Kusunungura uye Mhepo / Vhuvhu maVheji. Kunonatsa huwandu hwakawanda hwemhepo pane system kutanga-up. Inopa dziviriro kubva pombi yekudonha nekuda kwevhavha. Inobatanidza zvese zviri zviviri mukati memhuru imwe, yakawanda compact uye ine mari. NPT kana Metric tambo yeinopinda. Kushanda Kushanda uye Kupisa 16bar yakarongwa pa -10 ° C kusvika 120 ° C. Ngura Kudzivirirwa Fusion yakasungwa kupfeka kana mvura epoxy yakapendwa mukati uye exteri ...
9701 otomatiki Mhepo Vent Valve
Rondedzero Diki diki ye1 / 16 mukati. (1.6mm) kuburitsa mweya pasi pekumanikidza panguva yakajairika pombi kushanda. Iyo ichiyangarara yakabatana nemhepo kuburikidza neiyi link mashini iyo inokwanisa kushandisa iyo vent pasi yakazara yakazara pombi kumanikidza. NPT kana Metric tambo yeinopinda. WRAS yakatenderwa. Kushanda Kushanda uye Kupisa 16bar yakarongwa pa -10 ° C kusvika 120 ° C. Ngura Kudzivirirwa Fusion yakasunganidzwa kupfeka kana mvura epoxy yakapendwa mukati nekunze. ...
9208 otomatiki Mhepo Valve
Magadzirirwo Iyo 9208 ndeye yakakwira-inoshanda otomatiki mweya vharuvhu. Chigaro chakasimba chinopa chisimbiso chakavimbika che100%. Iyo imwechete kamuri dhizaini inopa zvirinani kuita pane zvakapetwa kaviri kamuri dhizaini. Iyo yekumedza uye yekumhanyisa kumhanya inogona kusvika kumhanya kwezwi. Iyo dhizaini yakakwenenzverwa zvakapusa zvengura isingaite simbi isina simbi. EPDM yekuisa chisimbiso mhete. Flanged uye kuchera zvinoenderana EN 1092-2 PN16 (Dzimwe mhando dzinowanikwa pane chikumbiro). Kuburitsa mukadzi shinda acc. KuDIN ISO 228. ...
9110 Inosanganisa Mhepo Valve Yematsvina
Magadzirirwo Kamwe kamuri kaviri orifice katatu basa rebasa mhepo uye vharuvhu otomatiki kuburitsa vharuvhu. Yakagadzirirwa kushanda nezvinwiwa zvinotakura zvikamu zvine simba sesewage uye tsvina. Regedza mweya panguva yekuchaja kweiyo system uye yekudyira mweya panguva yekudonha iyo system. Kupedzisa kupatsanura kwemvura kubva pakuisa chisimbiso mashandiro inopa mamiriro akakwana ebasa. Yese yemukati simbi zvikamu zvakagadzirwa nesimbi isina simbi. Flanged uye kuchera kunoenderana EN1092-2 PN16 (Dzimwe mhando ar ...
9101A Kaviri Orifice Mhepo Relief Valve
Magadzirirwo Dual mweya kuburitsa vent iyo yakaunganidzwa madiki mavhoriyamu emhepo panguva yakajairwa mashandiro mashandiro. Rega kupinda kwemweya wakakura panguva yekudonhedza pombi. Rega kuburitsa mweya wakakura panguva yekuzadza paipi. Ipa chengetedzo kubva pombi yekudonha nekuda kweiyo vacuum. Flange uye kuchera zvinoenderana EN 1092-2 PN16 (Mamwe marudzi anowanikwa pakukumbira). Kushanda Kushanda uye Kupisa 16bar yakarongwa pa -10 ° C kusvika 120 ° CC ..
9100 Yega Orifice Mhepo Relief Valve
Magadzirirwo Anopa mashandiro eese ari maviri Mhepo Kuburitswa uye Mhepo I Vacuum Mavharuvhu. Kunonatsa huwandu hwakawanda hwemhepo pane system kutanga-up. Inopa dziviriro kubva pombi yekudonha nekuda kwevhavha. Inopinza zvese zviri zviviri mukati meimwe vharuvhu, Zvimwe zvinowirirana uye zvine hupfumi. Flange uye kuchera kune EN1092-2 PN10 / 16; ANSI B16.1 Kirasi125. Kushanda Kushanda uye Kupisa 16bar yakarongwa pa -10 ° C kusvika 120 ° C. Ngura Dziviriro Fusion yakasungwa kupfeka kana mvura ep ...
6125 DIN3356 Globe Valve
Magadzirirwo Mavharuvhu zvinoenderana DIN3356. Chigaro chesimbi. Adjustable hunde chisimbiso. Kurongedza kutsiva pasi pekumanikidza. Inowanikwa nema flanges EN1092-2 2 PN10 kana PN16, ANSI B16.1 Kirasi 125. (Mamwe marudzi anowanikwa pakukumbira) Kutarisana kumeso kureba zvinoenderana neDIN3202 akateedzana F1. Kushanda Kushanda uye Kupisa 16bar yakarongwa pa -10 ° C kusvika 120 ° C. Corrosion Kudzivirirwa Mukati uye nekunze mvura epoxy yakapendwa ...
Magadzirirwo Mavharuvhu zvinoenderana EN13789, MSS SP-85. Chigaro chesimbi. Adjustable hunde chisimbiso. Kurongedza kutsiva pasi pekumanikidza. Inowanikwa nema flanges EN1092-2 PN10 kana PN16, ANSI B16.1 Kirasi 125. (Mamwe marudzi anowanikwa pakukumbira) Kutarisana kumeso kureba zvichienderana neEN558-1 basic series 10 uye ASME B16.10. Sarudzo 150 psi inowanikwa. Machira Magadzirirwo Muviri grey simbi simbi Bonnet grey kukanda simbi Trim yendarira Disc yendarira Stem isina simbi